के तपाईंले आफ्नो शौकलाई व्यवसायमा परिणत गर्ने बारे सोच्नुभएको छ? | बेजिया
मारिया vazquez | 12/01/2022 10:00 | आराम
के तपाईंले कहिल्यै ए सिर्जना गर्ने बारे सोच्नु भएको छ एक शौक वरपर व्यापार रचनात्मक वा कलात्मक? तपाईहरु मध्ये धेरैले यसबारे सोच्नु भएको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं तर पछि तपाईले फड्को मार्ने डर महसुस गर्नुहुनेछ, के हामी गलत छौं? आज, हाम्रो उद्देश्य यो हो कि तपाईले यसलाई केहि पैसा कमाउने अवसरको रूपमा लिनुहोस् जुन तपाईलाई धेरै मनपर्छ।
के तपाई पेन्टिङ, सिलाई, छालाको काम, भाँडाको आकार, बुनाई, वा तस्विर खिच्न मा राम्रो हुनुहुन्छ? अद्वितीय र वास्तविक वस्तुको लागि अपील आज एक दावी छ कि मार्फत सामाजिक सञ्जालहरू तपाईंलाई आफ्नो शौक मुद्रीकरण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। त्यहाँ धेरै लाभदायक व्यवसायहरू छन् जुन यसरी जन्मेका छन्, तर यो कुनै पनि हिसाबले प्रतिभा र भाग्यको कुरा होइन; पछाडि त्यहाँ सधैं एक छ योजना, प्रशिक्षण र काम। के तपाइँ तपाइँको शौकलाई व्यवसायमा परिणत गर्न कुञ्जीहरू जान्न चाहनुहुन्छ? हामी तिनीहरूलाई आज तपाइँसँग साझा गर्दछौं
1 योजना बनाऔं
2 यसलाई कामको रूपमा लिनुहोस्
3 ट्रेन गर्नुहोस् र सोध्नुहोस्
4 आफ्नो काम थाहा दिनुहोस्
5 गठबन्धन र नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नुहोस्
एउटा विचारलाई अवसरमा परिणत गर्न योजना चाहिन्छ। वाई योजना बनाउन कसैले आफैलाई केहि प्रश्नहरू सोध्नु पर्छ: के मसँग मेरो शौकलाई व्यवसायमा परिणत गर्न सही उपकरण छ? के यो आर्थिक रूपमा सक्षम छ? म के बेच्न चाहन्छु र कसलाई?
सृजनात्मक शौकको मजा लिनु र त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्नु धेरै फरक कुराहरू हुन्। तपाईंले गर्नुभएका कामभन्दा बाहिर यसबाट जीविकोपार्जन गर्न, तपाईंले दर्शकहरूलाई समात्नु पर्छ र आफ्नो शौकलाई जागिरमा बदल्नुहोस्। वा तपाईको शौकलाई व्यवसायको जटिल संसारमा अनुकूलन गर्न के हो र यो दुई दिनमा हासिल हुने कुरा होइन।
यसलाई विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ एक रणनीति योजना सुरु देखि नै। एउटा रणनीति जसले पहिलो चरणहरूमा गाईडको रूपमा काम गर्नेछ, सबैभन्दा कठिनहरू! सधैं यो ध्यानमा राख्दै कि तपाईले प्रगति गर्दा परिमार्जनहरू आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईं जोखिमहरूबाट डराउनुहुन्छ भने, पहिले एउटा रणनीतिको बारेमा सोच्नुहोस् जसले तपाईंलाई अरूको लागि पार्ट-टाइम काम गरेर र अर्को आधा आफ्नो शौकमा समर्पित गरेर जीविका कमाउन अनुमति दिन्छ। अगाडि बढ्ने समय हुनेछ।
यसलाई कामको रूपमा लिनुहोस्
यदि तपाईं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले सुरु गर्नुपर्छ आफ्नो शौक एक काम विचार गर्नुहोस्। त्यो हो, तपाईले प्रत्येक हप्ता प्राथमिकता र योजना बनाउनुपर्नेछ जुन तपाईले डेलिभर गर्नु पर्ने प्रोजेक्टहरूमा मात्र होइन तर ती पूरक कामहरूमा पनि आधारित छ जुन उद्यमी बन्न आवश्यक छ।
हामीले मनपर्ने शौकबाट व्यवसाय सुरु गर्नु उत्प्रेरक हो, तर स्वायत्त र आफैमा निर्भर हुनु जिम्मेवारीहरूको एक श्रृंखला बोक्छ। तपाइँलाई तालिम दिन, सिर्जना गर्न, तपाइँका ग्राहकहरूसँग सम्झौता गर्न र व्यवसायको प्राविधिक भाग व्यवस्थापन गर्न समय चाहिन्छ। र हो, एउटा एजेन्डा ताकि तपाईले केहि पनि बिर्सनु हुन्न।
ट्रेन गर्नुहोस् र सोध्नुहोस्
तपाईंले सायद त्यो शौकमा समर्पित वर्षहरू बिताउनुभएको छ जुन तपाईं अब व्यवसायमा परिणत गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ। र हामी शङ्का गर्दैनौं कि तपाईंले वर्षौंको ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ जसले तपाईंलाई सुधार गरेको छ, तर यदि तपाईंसँग छैन भने व्यापार व्यवस्थापन ज्ञान तपाईलाई व्यापार गर्न गाह्रो हुनेछ।
प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण छ. अनलाइन मार्केटिङ र कमर्स, अकाउन्टिंग र नेटवर्किङमा पाठ्यक्रम लिनुहोस् ताकि तिनीहरूबाट कसरी बढी फाइदा लिन सकिन्छ। र एउटै क्षेत्र वा व्यापार संघहरूमा पेशेवरहरूसँग सम्पर्कमा रहनुहोस् जसले तपाईंलाई तपाईंको परियोजनामा ​​सल्लाह र समर्थन गर्न सक्छन्। अन्य पेशेवरहरूसँग कुरा गर्नुहोस् तपाईंले वर्षौं अघि सुरु गर्नुभएको बाटो नै तिनीहरूले सुरु गरेका छन् भन्ने कुरा सामान्यतया ज्ञानवर्धक हुन्छ। र यो हो कि तिनीहरूले पहिले नै खराब र राम्रो निर्णयहरू, गल्तीहरू र सफलताहरूको आधारमा सिकेका छन्।
आफ्नो काम थाहा दिनुहोस्
आज, अनलाइन उपस्थिति हुनु आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालहरू तपाइँको लक्षित वा लक्षित दर्शकहरूमा पुग्नको लागि प्रमुख उपकरण हो। तर तिनीहरूलाई बाहिर खडा गर्न तपाईंलाई आवश्यक हुनेछ एक पेशेवर रूपमा ब्रान्ड सिर्जना गर्नुहोस्, एक ग्राफिक रेखा जसको साथ प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंलाई पहिचान गर्छन् र जसले तपाईंलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग बनाउँछ।
नेटवर्कहरूमा, विशेष गरी इन्स्टाग्राममा, यो ब्रान्ड डिजाइन अत्यधिक सान्दर्भिक हुन्छ। तर उत्पादन फोटोहरू मात्र अपलोड नगर्नुहोस्; यदि तपाईंले तिनीहरूलाई कसरी काम गर्नुहुन्छ, तपाईंले कुन उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ वा तपाईं केबाट प्रेरित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन अनुमति दिनुभयो भने सम्भावित ग्राहकहरूले तपाईंको कामप्रति छिटो सहानुभूति देखाउनेछन्; तपाईंको सबैभन्दा व्यक्तिगत पक्ष।
सोच्नुहोस् कि तपाईंले सिर्जना गर्नुहुने उत्पादनहरूबाट पैसा कमाउनुको अतिरिक्त, तपाईंले भविष्यमा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ उपकरण र कुञ्जीहरू ताकि प्रयोगकर्ताले आफ्नै सिर्जनाहरू बनाउन सिक्न सक्छ। एक पटक तपाईंले आफ्नो लागि प्वाल बनाउन प्रबन्ध गरिसकेपछि यो तपाईंको काममा विविधता ल्याउने तरिका हुनेछ।
गठबन्धन र नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईले जे गरे पनि, तपाईको कलात्मक दृष्टिकोण साझा गर्ने कोही सधैं हुनेछ। तिनीहरूलाई फेला पार्न र तालमेल सिर्जना गर्नाले तपाईंको व्यवसायको विकासमा योगदान दिन सक्छ। सहकार्यहरू दुबै नेटवर्कमा अन्य प्रोफाइलहरू र विशेष प्रकाशनहरूको साथ, तिनीहरू सधैं एक महान सहयोगी हुन्।
यसले तपाइँको शौकलाई व्यवसाय सिर्जनामा ​​परिणत गर्न मद्दत गर्दछ तपाईंको उत्पादनको लागि नयाँ तरिका वा उपयोगिताहरू जसले तपाइँलाई प्रतिस्पर्धाबाट फरक पार्छ। कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्दा, भिन्नतामा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।
के तपाईंले कहिल्यै आफ्नो शौकलाई व्यवसायमा परिणत गर्ने विचार गर्नुभएको छ? हप अप! यदि यो ठूलो प्रारम्भिक लगानी आवश्यक पर्ने चीज होइन भने, यसलाई प्रयास गर्नुहोस्! यदि तपाइँ यसको बारेमा धेरै सोच्नुहुन्छ भने, तपाइँ यसलाई फेरि मिस गर्नुहुनेछ। Bezzia मा हामी यी बिन्दुहरु मध्ये केहि थप उपकरण र जानकारी को साथ चाँडै विस्तार गर्ने वाचा गर्दछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » आराम » के तपाईंले आफ्नो शौकलाई व्यवसायमा परिणत गर्ने बारे सोच्नुभएको छ?
आँखा समोच्च कायाकल्प गर्न मास्क